.ကာကွယ်ဆေးကို တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ် (၃) ခုတွင် စတင်ထိုးနှံပေးမည်၊ ရပ်ကွက်အလိုက် စာရင်းကောက်ယူနေ. – Askstyle
.ကာကွယ်ဆေးကို တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ် (၃) ခုတွင် စတင်ထိုးနှံပေးမည်၊ ရပ်ကွက်အလိုက် စာရင်းကောက်ယူနေ.
ကာကွယ်ဆေးကို တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ် (၃) ခုတွင် စတင်ထိုးနှံပေးမည်၊ ရပ်ကွက်အလိုက် စာရင်းကောက်ယူနေ
ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ကိုဗစ် အတွက် ကာကွယ်ဆေးများ ထိုးပေးရာတွင် ဦးစားပေး အဆင့်များ ထိုးပေး ပြီးပါက ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းများသည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် များရှိ ပြည်သူများအား ဦးစားပေးထိုးပေးသွားမည်ဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ဒုတိ ယဥက္ကဋ္ဌ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်က ပြောပါတယ်။
“ပြည်သူတွေအ တွက် ထိုးပေးဖို့ အလှည့်ရောက်တဲ့ အခါမှာ COVID 19 အဖြစ်များတဲ့ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ ရခိုင် သေချာတာ ကတော့ ဒါပဲ၊ ငြင်းလို့မရဘူးလေ တခြားနေရာတွေ ထက်စာရင် ဒီနေရာတွေက အဖြစ်များတယ်လေ၊ ဒါ ကြောင့် ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနဲ့ ရခိုင်က ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ထားသူတွေကို ဦးစားပေးသွားမှာပေါ့”ဟု ပြောပါတယ်။
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံရန်အတွက် ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ် ရာတွင် ဦးတည်အုပ်စု (၁) ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၊ ဦးတည်အုပ်စု (၂) ရောဂါဝေဒနာ ဖြစ်လာလျှင် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံစားရနိုင်သည့် အုပ်စု(အသက်အရွယ် ကြီးသူများနှင့် ဆီးချို၊ သွေးတိုး၊ သွေးတိုး၊ နှလုံး၊ ကျောက်ကပ်၊ အသည်းရောဂါများနှင့် နာတာရှည်ရောဂါခံစားနေရသူများ)၊ ဦးတည်အုပ်စု (၃) ပြည်သူလူထုအများ ဟူ၍ သတ်မှတ်ထားကြောင်း သိရပါတယ်။
အဆိုပါသတ်မှတ်ချက်များအရ ဦးစားပေးအဆင့်အနေဖြင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ နှင့်အတူ အဓိက ကျသည့် အစိုးရဝန်ထမ်းနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များကိုလည်း ပထမဦးစားပေး ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးမည့် အုပ်စုတွင် ထည့်သွင်းထားကြောင်း နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်ည ၈နာရီအချိန်က ကိုဗစ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်သူများသို့ အစီရင်ခံတင်ပြသည့် မိန့်ခွန်းတွင် ပြောကြားထားပါတယ်။
ယခုအခါ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ဝယ်ယူထားသည့် ကိုဗစ် ရောဂါကာကွယ်ဆေး ၁၅ သိန်းမှာ ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက် မွန်းလွဲ ၃ နာရီခန့်အချိန်က မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပြီး တစ်ပတ်အတွင်း စတင်ထိုးနှံရန် စီစဉ်ထားကြောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဗဟိုဆေးသိုလှောင် ရေးဌာနတွင် ထားရှိသိုလှောင်ထားပြီး နိုင်ငံတစ်ဝန်း လုံးရှိ ဆေးသိုလှောင်ရုံ ၂၀ သို့ ကား၊ ရထား၊ လေယာဉ်တို့ဖြင့် ဖြန့်ဝေပေးသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရပါတယ်။
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရန်အတွက် စာရင်းကောက်ယူခြင်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်များအလိုက် စာရင်းစတင် ကောက်ယူလျက်ရှိကြောင်း ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်က သိရပါတယ်။